Kroos ayaa baas ka helay Lucas Vazquez oo ciyaarta bedel ku soo galay, waxaana uu kubada u dhameystiray si macaan iyadoo birta ay ku dhacday ka hor inta aysan shabaqa gelin taasoo ciyaarta ka dhigtay 2-1 oo ay Los Blancos hogaanka ku heysay.
Isku Aadka Wareega Group-yada Champions League Oo La Caawa La Sameynayo & Wax Walba Oo Aad Uga Baahan
Waa tartank ka weyn tartan walba oo ay ka qeyb galaan kooxaha qaaradda yurub. Champions League wuxuu xambaarsan yahay xiiso iyo xamaasad gooni ah, Jamaahiirta ayaana filan doona iney kasoo bixi doonaan kulamo xiiso leh oo in la sugo mudan.
Tartankaan waxaa kasoo qeyb gala 32-kooxood oo siyaabo kala duwan awoodahooda ugu soo muujiyay qaaradda yurub waxaana loo qeybin doonaa afar qeybood iyadoo la sameyn doono sideed group.
Halkee, Goorma Ayuuse Dhici Doona Isku Aadka?
Isku aadka wuxuu dhici doonaa Maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka August 2016, saacadda geeska Afrika markey tahay 8pm (Fiidnimo), kuna beegan waqtiga UK (5pm), Sidoo Kalana Wadamada Bartamaha Yurub ku yaala waqtigooda waxey ku beegan tahay 6pm.
Xafladda lagu sameynayo Isku aadka waxey ka dhici doontaa Magaalada Monaco ee dalka France oo ah madal mar walba lagu sameeyo isku aadka tartanka yurub.
Sidey Kooxaha Qaanadaha Ugu Kala Jiraan?
Kooxda ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska ayaa gali doonta qeybta koowaad (Pot 1) madama sharciga cusub ee UEFA uu tilmaamayo in dhamaan kooxaha kusoo guuleysta horyaalada ugu sareeya qaaradda yurub ay gali doonaan sideedda saf ee ugu horeeya, waxaana ku wehlin doona: Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain Iyo CSKA Moscow oo kusoo kala guuleystay horyaalada: Spain, Germany, Italy, Portugal, France Iyo Russia, iyadoo aysan ka marneyn kooxda difaacaneysa tartanka Ee Real Madrid.
Iney Isku Qeyb Noqdaan Maxaa Fa’ido Ugu Jira? Dhamaantood Sideedaan kooxood wey kala badbaadayaan mana isku beegmi doonaan waregga groupka Champions League.
POT 2: Qeybta labaad waxaa ku jira kooxo ay ka mid yahiin: Dortmund, Arsenal, Manchester City, Sevilla Napoli Iyo Leverkusen kuwaas oo ayagana miisaan ku leh yurub/
POT 3: Qeybta Sadexaad kooxaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah Tottenham Hotspur, Lyon, PSV Eindhoven.
POT 4: Qeybta afaraadna waxaa ugu xoogan Monaco, Besiktas Iyo Celtic.
Goorma La Ciyaarayaa Kulamada Champions League?
Bartamaha September ayaa daaha laga qaadi doonaa tartanka Champions League iyadoo la ciyaari doono kulamada ugu horeeya wareegga groupyada 13-ka Iyo 14-ka ayaana la ciyaari doonaa.
Iyadoo Kulanka ugu dambeeya ee wareegga groupka la ciyaari doono 6-da Iyo 7-da December, markaas oo la ogaan doono 16-ka kooxood ee soo gudba.
Sidey Kooxaha Isugu Aadi Karaan, Yaase Isku Aadi Karin?
Kooxaha ku wada jira hal qaanad iskuma aadin karaan sida sharcigu qabo, sidoo kale kooxaha ka wada socda hal horyaal iskuma aadi karaan tusaale ahaan (Barcelona Iyo Sevilla) ama (Arsenal Iyo Leicester City). Dhanka kale waxaan sinaba isugu aadi karin wareegga group-ka Champions League-ga kooxaha ka kala socda Russia Iyo Ukraine waana go’aan ay gudiga UEFA gaareen dhawaan.
Waa Kuwee Kooxaha Ugu Guulaha Badan?
Real Madrid ayaa ah kooxa ugu guulaha badan tartankaan taariikhda waxeyna bishii May ee sanadkaan ku guuleysatay koobkeedii 11-aad, kooxda kusoo xigta waa Ac Milan oo ku guuleysatay 7-jeer, halka kooxaha Bayern Munich, Barcelona Iyo Liverpool ay ku guuleysteen min 5-jeer
Daawo Qosolkaan : Daafac Shines Ah Oo Si Cajiib Ah Kooxdiisa Uga Dhaliyay Gool , Maxaase Ka Horeeyay?.
​Lu Yao oo ka tirsan kooxda Henan Jianye ee horyaalka Shinaha ayaa si la yaab leh kooxdiisa uga dhaliyay gool ka dib kulan ay la ciyaareen kooxda kale Hangzhou.
Arinta yaabka leh ayaa ah in goolkaas uu yimid ka dib sedex isku day oo qaab qaldan ah ay saaxibadiisa ugu sigteen in ay goolka isaga dhaliyaan balse ugu dambeyn Lu Yao ayaa sameeyay waxii la filayay.
Kulankaas ayaa kooxdaas Henan Jianye looga badiyay sedex gool oo nadiif ah ,
​Waxaa la soo sameeyay isku aadka wareega saddexaad ee Leaque Cupka waxaana wareegan ku soo biiray dhamaan kooxaha waa wayn ee Premier Leaque-ga. Kooxaha Liverpool iyo Chelsea ayaa xalay ka soo baxay wareegii labaad waxayna ka mid noqdeen kooxaha waa wayn ee sugayay in ay ogaadaan kooxaha ay ku dhici doonaan wareega saddexaad.
Wareega saddexaad ee Leaque Cupka waxaa ku tartama 32 kooxood wuxuuna fursad fiican u noqdaa kooxaha heerka hoose oo la ciyaaraha kooxaha Premier Leaque-ga iyada oo mararka qaar ay ka soo baxdo natiijo lama filaan ah. Wareega 3aad ama wareega 32da kooxood waxaa la ciyaarayaa isbuuca 19ka bisha September ee sannadkan.
Kooxda koobkan difaacanaysa ee Man City ayaa booqan doonta kooxda Premier Leaque-ga ee Swansea City halka Jose Mourinho iyo kooxdiisa Man United ay marti u noqon doonaan kooxda Northampton. Arsenal ayaa iyaduna ka badbaday kulan adag waxayna booqan doontaa kooxda Nottingham Forest .
Kulanka ugu adag ayaa ah kulanka ay Chelsea booqan doonto King Power Stadium iyada oo wajihi doonta kooxda koobka horyaalka haysata ee Leicester City . Liverpool ayaa iyaduna u u safri doonta kooxda Derby County laakiin waxaa cajiib ah in dhamaan kooxaha waa wayn ee Premier Leaque-gu ay kala badbaadeen isla markaana ay dhamaantood wada marti noqon doonaan wareega saddexaad ee Leaque Cupka.
HALKAN KAGA BOGO ISKU AADKA WAREEGA SADDEXAAD EE LEAQUE CUPKA OO DHAMAYSTIRAN:
Manchester City ayaa si rasmi ah u xaqiijisatay in ay qayb ka tahay 32 ka kooxood ee barri loo samayn doono isku aadka Champions Leaque-ga wareegiisa groupyada kadib markii ay kooxda Steaua Bucharest ku garaacday 1:0 iyada oo isku darka kulamadii lugta hore iyo lugta hore ugu soo baxday 6:0. Guardiola ayaa markan ka war sugi doona saddexda kooxood ee ay isku groupka noqon doonaan, wuxuuna taas ogaan doonaa barri oo khamiis ah marka la soo saaro isku aadka heerka groupyada Champions Leaque-ga oo lagu qaban doono maaalada Monaco.
Manchester City ayaa kooxda Steaua Bucharest ku soo dhawaysay Etihad Stadium kulankii lugta labaad ee isreeb reebka Champions Leaque-ga waxayna City kulankan ciyaaraysay iyada oo doonaysay kaliya in ay si rasmi ah u xaqiijisato in ay u soo baxdo heerka Groupyada Champions Leaque-ga kadib markii ay kulankii hore 5:0 ku soo xaaqday kooxda martida u ahayd ee Steaua Bucharest.
Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa kaga dhabeeyay balanqaadii uu sameeyay ee ahaa in goolhaye Joe Hart iyo Yaya Toure ay kulankan ka heli doonaan fursad ay markale kooxda ugu ciyaaraan, waxayna labaduba ku soo bilawdeen shaxda Guardiola ee kulankii lugta labaad ee isreeb reebka Champions Leaque-ga. Jeo Hart ayaa sidoo kale kulankan loo xidhay calaamada kabtanimada kooxdiisa.
Waxa kale oo kulankan ku soo bilawday difaaca da’yarka ah ee Maffeo oo ka garab ciyaari doona Stones, Kolarov iyo Clichy, waxaana khadka dhexe ku soo wada bilawday Fernando, Toure iyo Delp halka Nolito iyo Iheanacho oo weerarka hogaaminayay ayaa caawin ka helayay Navas. Halka Sergio Aguero , David Silva iyo Raheem Sterling oo kulamadii hore ku soo wada bilawday ay kaydka ku wada jireen.
SHIXIHII RASMIGA AHAA EE LABADA KOOXOOD KULANKAN KU SOO GALEEN:
Manchester City XI (4-1-4-1): Hart; Maffeo, Stones, Kolarov, Clichy; Fernando; Navas, Toure, Delph, Nolito; Iheanacho.
Kaydka: Gunn, Angelino, Adarabioyo, Fernandinho, Silva, Sterling, Aguero.
Steaua Bucharest XI (4-2-3-1): Cojocaru; Aganovic, Tamas, Mitrea, Momcilovic; Bourceanu, Muniru; Enache, O. Popescu, Hamroun; Tudorie
Kaydka:Nita, Simion, D. Popescu, Vilceanu, Achim, Stanciu, Popa.
Waxaa si buuxda loo fahmi karayay in uu yahay kulan xili horeba natiijadiisa la sii ogaa taasi waxay keentay in Manchester City ayna waqti badan ku lumin cadaadis xoogan oo ay saarto kooxda martida ahayd Steaua Bucharest, waxayna ujeedadeeda kowaad ahayd in ay si buuxda u ilaashato natiijada ay guusha ugu taagnayd isla markaana ay ka taxadarto in ciyaartoydeeda muhiimka ah ay dhawacyo soo gaadhaan.
Laakiin kooxda martida ahayd ee Steaua Bucharest ayaa doonaysay in ay raadiso goolal ay marka hore ku soo yarayn karto farqiga goolashii lagu soo xasuuqay kulankii lugtii hore, basle Manchester City ayaan wax fursad ah siin Steaua Bucharest waxayna kooxda Guardiola awooday in ay si buuxda gacanta ugu hayso maamulka ciyaarta.
Inkasta oo ay Man City fursado abuurtay haddana may ahayn kuwo dhibaato wayn u keeni karay goolhayaha iyo difaaca kooxda Steaua Bucharest, waxayna qaybta hore ahayd mid lagu caajisay oo aan wax goolal ah la kala dhalin iyada oo waqtigii nasashada lagu kala baxay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Man City bilawday in ay abuurto fursado halis badan waxayna daqiiqadii 55 aad heshay fursad aad u fiican kadib markii Delph uu helay fursad fiican iyada oo Toure iyo Iheanacho ay si fiican iskugu soo xidhmeen laakiin fursadan ayaan noqon mid uu Delph ka midho dhaliyay.
DAQIIQADII 56 AAD GOOOOOOOOOOL! Haddii daqiiqad ka hor uu fursad fiican gool ku dhalin waayay, Fabian Delph ayaa markan si qurux badan u dhamaystiray isla markaana Manchester City goolka furitaanka madax ugu dhaliyay, waxaana kubbad fiican dhinaca midig ka soo qaaday Navas waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Man City hogaanka ciyaarta kula wareegtay. Natiijada isku darka labada kulan ayaa noqotay 6:0 waxayna Man City sugaysay inta ay ciyaartu ka dhamaanayso.
Tababare Guardiola ayaa markan si rasmi ah xaqiijisay in natiijada ciyaarta la go’aamiyay wuxuuna ciyaarta ka saaray Jone Stones oo ay jamaahiirta kooxdiisa City isku sare tageen isaga oo fursad siiyay da’yarka Oluwatosin Adarabioyo.
DAQIIQADIHII 70,71,72 AAD HALIS WAYN!. Kooxda martida ahayd ee Steaua Bucharest ayaa heshay saddex fursadood oo xidhiidh ah waxayna u muuqatay in ay ugu danbayn heleen goolkooda furitaanka ee labada kulan laakiin labada fursadood ee hore hoolhaye Joe Hart ayaa iskugu muujiyay Guardiola halka fursada saddexaad oo ahayd mid goolka hortiisa lagu helay difaaca da’yarka ah ee Maffeo uu dirqi ku daboolay.
DAQIIQADII 73 AAD Guardiola ayuu walwal soo foodsaaray kadib markii uu dhaawac muruqa ahi soo gaadhay da’yarka Kelechi Iheanacho kaas oo isaga oo kubbad baacsanaya uu dhawac xumi soo gaadhay wuxuuna Kelechi Iheanacho awoodi waayay in uu lugihiisa garoonka kaga baxo waxayna taasi keentay in garoonka sariir looga dhex qaado, waxaana daawayn kadib lagu soo badalay Fernando.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1:0 ay Man City guul ku gaadhay isla markaana ay si rasmi ah kaga mid noqotay 32 ka kooxood ee xili ciyaareedka cusub ka tartami doona Champions Leaque-ga, wuxuuna Guardiola si rasmi ah u bilaaban doonaa tartanka uu qof kastaaba jecel yahay ee UEFA Champions Leaque-ga
Weeraryahanka Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa shaaca ka qaaday inuu yaraantiisii ku dayan jiray kabtankii hore xulka qaranka England & Manchester United David Beckham isagoo sidoo kale qirtay inuu dartiis u xirtay numberka 7-aad ee labadabada qaranka & kooxda.
Antoine Griezmann ayaa ku guuldareystay laba final oo waaweyn sanadkaan markii uu qasaaro kala kulmay isagoo hogaaminaya Atletico Madrid kooxda ay magaalo xifaaltamaan ee Real Madrid finalka Champions League-ga, sidoo kalana wuxuu guuldaro xanuun badan kala kulmay Portugal finalkii Euro 2016 isagoo matalayay dalkiisa France.
Si kastaba Griezmann oo dhawr kooxood lala xiriiriyaya xagaagan ayaa xaqiijiyay iney macquul tahay u dhaqaaqida Premier League-ga mustaqbalka si uu arinkaas uga daydo David Beckham.
“Waan jeclahay in badan [David Beckham]” Ayuu yiri Antoine Griezmann oo la hadlayay Guardian. “wuxuu ii ahaa qof aan ku daydo, waanan sababta aan u xirto funaanadaha gacmaha dheer sidoo kalana aan u xirtay numberka 7-aad”
Mar la weydiiyay hadii uu ebid rajeeyay ka ciyaaridda horyaalka England wuxuu ku jawaabay: “Haa, Maxaa diiday? Hadii uu dhamaan lahaa heshiiska Atletico Madrid waan weydiin lahaa nafteyda su’aashaas”
Kulamada Isbuucii labaad ee horyaalka Ingiriiska ayaa xalay lasoo afjaray iyadoo khabiirka isboortiga BBC-da Garth Crooks uu soo saaray shaxdiisa ugu fiican kooxda isbuuca waxaana hogaanka u haya xidigaha Manchester City.
Citizens oo marti aheyd waxey xiligii qadada sabtida gurigeeda kusoo xasuuqday Stoke City oo ay kusoo garaacday 4-1, Sergio Aguero ayaa dhaliyay laba gool kaas oo Zlatan Ibrahimovic kula midoobay halka ugu sareysa gooldhalinta Horyaalka Ingiriiska, balse khabiirka sooma xulan Nolito oo laba gool dhaliyay qeybahii ugu dambeeyay ciyaartaas.
Sidoo kale waxaa shaxdaan kasoo muuqday Raheem Sterling oo aad moodo inuu dib u dhashay tan iyo markii xilka tababaranimo ee kooxda loo dhiibay Pep Guardiola wuxuuna sameeyay waxqabad fiican isagoo ku lug yeeshay guul walba oo ay kooxda gaartay dhamaan tartamada oo dhan, halka John Stones uu isna kasoo muuqday waana xidiga sadexaad ee City uga qeyb ah shaxdaan.
Kulan Ka Tirsan La Liga Oo La Hakiyay Waqti Kooban Markii Jamaahiirta Martida Loo Ahaa Ay Cunsuriyanimo Kula Kaceen Xidig Reer Spain Ah
Kulankii u dhaxeeyay kooxaha Sporting Gijon Iyo Athletic Bilbao ayaa la joojiyay kadib markii Jamaahiirta martida loo ahaa ay Isir Naceyb u muujiyeen weeraryahanka da’da yar ee reer Spain Inaki Williams.
Garsoore Clos Gomez ayaa si kumeel gaar ah u hakiyay ciyaarta daqiiqadii 30-aad markii uu maqlay hadalo isir naceyb ah oo kasoo yeeraya qeybta taageerayaasha Sporting Gijon taasoo ku wajahneed 22-jirka madow ee Bilbao.
Qaar ka mid ah ciyaartoyda Bilbao ayaa Jamaahiirta ka codsaday iney joojiyaan balse kulanka ayaa dib loo bilaabay kadib markii cod baahiyaha garoonka loo adeegsaday in la weydiisto iney joojiyaan hadalada isir naceybka ah.
Inaki Williams waa 22-jir ku dhashay Bilbao balse ay iska dhaleen waalid kasoo jeeda dalka Liberia ee qaaradda africa wuxuuna noqday xidigii ugu horeeyay ee madow ah oo kooxda ka dhisan Basque gool u dhaliya sanadkii 2014.
Barcelona Oo Camp Nou Ku Gumaaday Real Betis, SUPER Luis Alberto Suárez Oo Saddexley Dhaliyay, Lionel Messi Oo Laba Gool Raacsaday Iyo Balaugrana Oo Guul Wayn Ku Furatay Xili Ciyaareedka Cusub
Kooxda koobka horyaalka La Ligaha difaacanaysa ee Barcelona ayaa si xun Camp Nou ugu xasuuqday kooxda Real Betis iyada oo kooxda Luis Enrique guul wayn ku furtay xili ciyaareedka cusub ee 2016/17. Barcelona ayaa guushan ku gaadhay 6:1 waxaana kulankan saddexley ka dhaliyay Luis Suarez halka Lionel Messi uu laba gool raacsaday waxaana goolka furitaanka Barcelona u saxiixay Arda Turan.
Barcelona ayaa si xoogan ku bilaabtay xili ciyaaredka cusub inkasta oo ay kooxdeeda ka maqnaayeen todoba ciyaartoy oo kooxda kowaad ahi. Saxiixyada cusub ee ay Barcelona samaysay xagaagan ayaa haddaba door wayn ku yeeshay kooxda Luis Enrique.
Inta ayna ciyaartu bilaamin Barcelona ayaa soo badhigtay koobka La Ligaha ee ay doonayso in ay xili ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah ay ku guulaysato waxayna koobkan ku soo badhigtay Camp Nou ka hor inta ayna bilaamin ciyaartii ay ku furteen xili ciyaareedka cusub ee 2016/17.
KAYDKA: Digne, Samper, Munir, Kaptoum, Pereira, Vidal, Masip.
KAYDKA: Gimenez, Ceballos, Musonda, Jose Carlos, Joaquin, Ruiz, Alegria.
Barcelona ayaa kulankan ka bilaabaysay in ay xili ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah ay ku guulaysato koobka horyaalka La Ligaha oo ay ku soo guulaysatay labadii xili ciyaareed ee la soo dhaafay. Barcelona ayaa doonaysay in ay sii wado rekoodh guuldaro la’aanta ay ku haysato kulamada furitaanka La Ligaha oo ayna wax guudaro ah soo arkin tan iyo kulamadii furitaankii sanadkii 1939 markaas oo ay 1:0 guuldaro ahi ka soo gaadhay kooxda Espanyol.
DAQIIQADII 6 AAD GOOOOOOOL! Barcelona ayaan waqti badan iskaga lumin in ay goolkeedii xili ciyaareedka cusub ugu horeeyay ee La Ligaha la timaado waxaana doorkan albaaka gool dhalinta La Ligaha ee Barcelona magiciisa ku qoray xidiga wacdaraha cusub la soo baxay ee Arda Turan kaas oo goolkan ku dhaliyay kubbad uu shaqadeeda soo bilaabay Lionel Messi isla markaana uu Jordi Alba cawinteeda sameyay waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Barcelona xili horeba hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Laakiin kooxda martida ahayd ee Real Betis ayaan ku niyadjabin goolka ay Barcelona xili horeba kaga naxsatay waxayna bilawday in ay raadiso goolka barbaraha inkasta oo ay Barcelona wali sii ahayd kooxda goolka labaad laga filan karayay.
DAQIIQDII 21 AAD GOOOOOOL GOOL!. Kooxda martida ahayd ee Real Betis ayaa awooday in ay ciyaarta dib ugu soolaabto oo ay la timaado goolka barbaraha waxaana gool cajiib ah oo laaga xorta ah ku yimid kooxda Betis culayska kaga dulqaaday Rubén Castro kaas oo si fiican u garaacay Bravo oo awoodi waayay in uu sameeyo wax badbaadin.
Rubén Castro oo xili ciyaareedkii hore Real Betis uu soo dhaliyay 19 gool iyo waliba 4 gool caawineed ayaa kooxdiisa ciyaarta dib ugu soo celiyay isaga oo neefta dib ugu celiyay jaamaahiirta Camp Nou. Laakiin goolkan ayaa yimid xili Barcelona laga filayay goolka labaaad.
DAQIIQADII 27 AAD Barcelona ayaa u muuqatay in ay heshay rekoodhe cadaan ah kadib markii uu Mandi dhinaca danbe kaga yimid Luis Suarez kaas oo ku jiray xerada ganaaxa Real Betis, laakiin garsooraha ayaan qaladkan u arkin mid rekoodhe ah inkasta oo muuqaalada iyo sawiradu si cad u muujiyeen in Mandi uu qalad cadaan ah ku galay Suarez.
DAQIIQADII 29 AAD Barcelona ayaa ugu dhawaatay in ay goolkeeda labaad la timaado kadib markii uu Lionel Messi kubbad fiican la soo ciyaaray Jordi Alba laakiin darbo laba jeer ahayd oo uu Messi tuuray ayaa ugu danbayn birta goolka ku dhacday.
DAQIIQADII 37 AAD GOOOOOOOOOOL! Lionel Andrés Messi ayaa kooxdiisa hogaanka u soo celiyay kadib markii uu goolka labaad ku dhaliyay kubbad uu caawinteeda sameeyay xidiga boos kasta ka ciyaara ee Sergi Roberto , wuxuuna goolkan ku dhaliyay lugta bidix ee rekoodh kasta ku soo jabiyay ama uu ku soo dhigay wuxuuna Messi sidaa ku furtay gool dhalintiisa La Ligaha ee 2016/17, isaga oo ciyaarta ka dhigay 2:1 ay Barcelona markii labaad hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Barcelona ayaa si buxuuda ciyaarta gacanta ugu qabtay waxayna bilawday in ay si xoogan u raadiso goolkeeda saddexaad si ay u aamusiiso cadaadiska kaga imanayay kooxda martida u ahayd ee Real Betis, waxayna markasta halis ugu jirtay in ay goolkeeda saddexaad la timaado.
DAQIIQADII 42 AAD GOOOL GOOOL GOOOL. Barcelona ayaa heshay goolkeeda saddexaad ee ay kalsoonida buuxda ku heshay waxaana si qurux badan goolkan u dhamaystiray Luis Alberto Suárez oo markiisa bilawday gool dhalinta La Liga-ha ee uu abaal marinteeda difaacanayo wuxuuna markiisa goolkan ku dhaliyay kubbad uu Sergi Roberto ka soo karoosay dhinaca midig iyada oo Suarez uu kubbada darbeeyay isaga oo aan joojin, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3:1 ay Barcelona hogaana ciyaarta ugu raaxaysanayso.
Xaqiiqdii Sergi Roberto inkasta oo uu wali yahay ciyaartoy da’yar ah waxa hubaal ah in uu buuxiyay booskii difaaca midig ee uu Alves baneeyay wuxuuna sameeyay labada gool caawineed ee Messi iyo Suarez. Hore ayaan u sheegnay in Sergi Roberto uu yahay kaadhka qarsoon ee Luis Enrique kaas oo uu ka ciyaarsiiyo haddba booska uu dhibaato ka dareemo. Qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 3:1 ay Barcelona gacanta sare ku lahayd.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Barcelona soo laabtay iyada oo ka sii dar dar fiican sidii ay ahayd qaybtii hore ee waxayna bilawday in ay raadiso goolkeeda afraad waxaana markiiba la filan karay in Barcelona ay goolal badan dhalin karto.
DAQIIQADII 56 AAD GOOOOOOOL! Sidii la filayay Barcelona ayaa heshay goolkeeda afraad waxaana markan goolkiisii labaad ee kulankan shabaqa Real Betis ku taabtay Luis Alberto Suárez kaas oo gool caawin fiican ka helay Lionel Andrés Messi oo ciyaarta iftiiminayay waxayna ciyaartu noqotay 4:1 ay Barcelona ku xasuuqayso kooxda Real Betis.
DAQIIQADII 57 AAD GOOOOOOL GOOOOL: Hal Daqiiqo wax kayar markii uu goolka Luis Suarez caawintiisa sameeya ayuu markale Lionel Andrés Messi indhaha ku xaday goolka shanaad ee Barcelona isaga oo inta uu Arda Turan kubbada ka soo qaatay difaaca Real Betis ku kala dhantaalay ka hor intii aanu shabaqa ka soo taabay goolhaye Adan oo awoodi waayay inuu wax badbaadin ah sameeyo wuxuuna markiisa Messi sidaa ku dhaliyay goolkiisii labaad isaga oo ciyaarta ka dhigay 5:1 ay Barcelona ku gumaadayso Real Betis.
DAQIQIADII 82 AAD GOOOOOOOOOOOOL! SADDEXLEY! Luis Alberto Suárez ayaa halkan ku dhamaystirtay saddexleydiisii ugu horaysay ee xili ciyaareedka cusub isaga oo halkiisa ka sii watay gool dhalintii cajiibka ahayd ee uu xili ciyaareedkii hore ku soo guulaystay. Messi ayaa laga badbaadiyay waxa u muuqday goolkiisa saddexaad laakiin kubbada uu badbaadiyay goolhaye Adan ayaan ka raagin shabaqa kooxdiisa waxaana fursadan saddexleyda uu kulankan ka dhaliyay ku dhamaystirtay Suarez.
DAQIIQADII 84 AAD oo ah laba daqiiqo kadib goolka Suarez ayuu Rubén Castro markiisa dhaliyay goolkiisa labaad wuxuuna ciyaarta ka dhigay 6:2 ay Barcelona hogaanka ciyaarta ku hayso wuxuuna kooxdiisa ka soo yareeyay farqiga goolasha tirada badnaa.
SHEEKADA CIYAARTA: Arda Turan ayaa goolka furitaanka dhaliyay wuxuuna sameeyay gool cawinta Lionel Messi, Sergio Roberto ayaa sameeyay laba gool caawineed isaga oo Messi iyo Suarez min hal gool ka caawiyay. Messi ayaa laba gool dhaliyay sidoo kale waxa uu goolka labad ka caawiyay Luis Suarez, halka Luis Suarez uu saddexley ka dhaliyay kulankan. Jorid Alba ayaa isna sameeyay hal gool caawineed. Xidiga kooxda Real Betis ee Rubén Castro ayaa isna laba gool kulankan ka dhaliyay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 6:2 ay Barcelona ku xasuuqday kooxda martida u ahayd ee Real Betis isla markaana ay fariin cad ugu dirtay kooxaha La ligaha. Waxayna Barcelona xili ciyaareedka cusub ku bilaabtay qaab ciyaareed aad u fiican inkasta oo ay Luis Enrique ka maqnaayeen todoba ciyaartoy oo kooxda kowaad ahi.